Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: mbola ady mafy ny miandry ny PSG | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: mbola ady mafy ny miandry ny PSG
Par Taratra sur 04/05/2021
Hitana ny sain’ny rehetra amin’ity talata ity ny lalao manasa-dalana miverina, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, baolina kitra. Hanafika any Angletera ny Parizianina. Anisan’ireo hiatrika izany, Randriamamy Mathyas.
Ho fantatra anio ny ekipa voalohany hiatrika ny famaranana hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra “Ligue des champions”. Hiady izany tapakila izany ny Paris St Germain sy ny Manchester City.
Hanafika an-dry zareo Anglisy amin’ity ny Frantsay, izay hanala vela satria efa resy tamin’ny isa, 2 no ho 1 nandritra ny lalao mandroso tany Paris. Ao anatin’ireo lisitry ny mpilalao nentin’i Mauricio Pochettino mpanazatra, ilay mpiandry tsatoby malagasy, Randriamamy Mathyas.
Ankoatra izay, anisan’ireo hijoro ihany koa i Kylian Mbappé. Raha tsiahivina, naratra manko ny tovolahy taorian’ny lalao mandroso. Tsy mbola niatrika ny fifaninanam-pirenena frantsay ihany koa moa izy, ny asabotsy lasa teo, raha nidona tamin’ny Lens. Afaka izany ny ahiahin’ny Frantsay, izay hiantehitra betsaka amin’ity lohalaharana ity. Mbola ao anatin’ny lisitra ihany koa i Neymar Junior, i Angel Di Maria ary i Moise Kean ary i Mauro Icardi. Miandry ny “remontada”, ataon’ny Parizianina izany.
Etsy ankilany, hilalao ao an-taniny ny Citizen amin’ity. Heverin’ny rehetra fa ho sarotra amin’ny Frantsay ny handrodana ny Anglisy, ao an-taniny. Ny Citizen, izay tsy mbola resy mihitsy tamin’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa ity. Nahazo fandresena 10, ady sahala 1. Nahatafiditra baolina 23 ary nidirana baolina 4.
Fandresena 6, ady sahala 1 sy faharesena 4 kosa ny an’ny Paris St Germain. Nahafaty baolina 21 ary nidiram-baolina 12.